Manontany Ny Syriana Iray: Mahavita Mamono Olona Ve Aho? · Global Voices teny Malagasy
Manontany Ny Syriana Iray: Mahavita Mamono Olona Ve Aho?
Nandika (en) i Lara AlMalakeh
Voadika ny 14 Marsa 2016 6:20 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, Español, русский, polski, عربي
Ity sary tamin'ny 2012 ity dia mampiseho zazalahy Syriana mitsiky sy mihazona fitaovana manohitra ny fanafihana an-habakabaka eo anoloan'ny fakan-tsary tao an-tanànan'i Marayan ao avaratr'i Syria. Sary avy amin'i Syria Freedom, nozaraina tao amin'ny flickr sy nampiasaina tamin'ny alalan'ny (CC BY 2.0)
Ity lahatsoratra ity dia andiany manokana amin'ireo lahatsoratra nosoratan'ilay bilaogera sy mpikatroka Marcell Shehwaro, mampiseho ny zava-misy amin'ny fiainana ao Syria mandritra ny ady mitam-piadiana mitohy eo amin'ireo tafika matoky ny fitondrana ankehitriny sy ireo mikasa hanongana azy.
Mahavita mamono olona ve aho?
Raha nisy olona nanontany ahy io fanontaniana io dimy taona lasa izay, amin'ny maha-olona zatra mandravaka ny latabatrany amin'ny torohevitr'i Jesosy ho an'i Petera ahy— “Ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao. Fa izay rehetra mandray sabatra no hovonoina amin'ny sabatra “—dia mety namaly haingana sy am-pahatsorana tokoa aho hoe:” Tsy azo heverina! Sady tsy mahavita no tsy manana faniriana hamono olona aho. “Tsy mila nieritreritra lalina kokoa, dia mety nanampy aho hoe:”—na iza na iza ity olona ity, ary tsy maninona izay habibiana vitan'izy ireo“.
Tianay foana ny mieritreritra fa mahafatifaty izahay; milofo mafy izahay mba tsy hanana fofona fahafatesana; mino izahay fa mpitondra hafatry ny fiainana. Tianay ny mieritreritra fa eto amin'ity tany ity izahay mba hahatonga azy ho toerana tsara kokoa. Eto izahay mba hahatratra tanjona ambony kokoa. Velona isika mba hihira ny fiainan'ny hafa sy handray fanambinana avy aminy, fa tsy handatsaka ireo aina ireo sy hanaisotra azy. Dimy taona lasa izay, tsy nino ny fanalan-jaza na ny fanamelohana ho faty aho. Halako ny fitaovam-piadiana sy ny herisetra ary nino aho fa ny fiovana dia atao amin'ny fitiavana.
Ankehitriny, tsy fantatro intsony izay inoako. Ady izao (atrehina izao). Miaina miteronterona anelanelan'ny fiainana sy ny fahafatesana mandritra ny fotoana rehetra. Mila manana ny fironana voajanaharin'ny fiavotan-tena hiaina hatrany ianao hitondra anao hanavatsava ny fahafatesana tsy azo ihodiviran'ny fahavalo, na milavo lefona. Tsy maintsy maty ny iray aminareo ho amin'ny fandresen'ilay hafa. Ny herisetra no mamaritra indray ny zava-drehetra: ny fanantenanay, ny finoanay sy ny fitokisanay eo amin’ izao tontolo izao. hatramin'ny dingana voalohany indrindra no tsy maintsy nandinika indray ny valintenin'ireo ho an'ireo fanontaniana feno herisetra maro ireo aho: Mpamono olona ve aho? Mahavita mamono olona ve aho? Te-hamono olona ve aho?
“Dimy taona lasa izay, tsy nino ny fanalan-jaza na ny fanamelohana ho faty aho. Halako ny fitaovam-piadiana sy ny herisetra ary nino aho fa ny fiovana dia atao amin'ny fitiavana. Ankehitriny, tsy fantatro intsony izay inoako.”
Tonga ny dona voalohany raha nitifitra anay, vondrona mpanao hetsi-panoherana milamina izy ireo. Nitsangana tao izy ireo; mitovy aminay izy ireo amin'ny zava-drehetra ankoatra ny nofy. Niteny ny fiteninay izy ireo, mpiray tanàna ihany aza ny sasany amin'izy ireo. Tsy maintsy nanaiky aho fa olona tahaka ahy ny mpamono olona. Angamba hatramin'ny omaly, nandeha tany amin'ny toerana iray ihany izahay ary nandihy tamin'ny hira iray. Angamba raiki-pitia tamin'ny Mandan'i Aleppo, tahaka ahy ity mpamono olona ity. Angamba izy nanana sipa nihaona taminy tao amin'ny trano fisotroana kafe na tany amin'ny oniversite. Nahoana izy no lasa mpamono olona tampoka noho ny baiko avy amin'ny Sultan? Avy aiza izany fahavononana hamono olona izany? Nahoana ny olona iray, izay toa tsy nahazo tombontsoa manokana tamin'ny rafitra no mivadika ho toy ny milina mpamono olona tahaka izao? Te-hieritreritra aho fa tsara kokoa noho izany olon-doza izany aho. fa tsy misy olona, tsy misy foto-kevitra, hahatonga ahy hanao zavatra tahaka izany.
Nipetraka indray ny fanontaniana raha voatifitra ny reniko, ary raha natao famotorana ihany koa aho. Avy eo naniry aho mba ho faty ilay mpanao famotorana, indrindra taorian'izy nandrahona ny hanimba ny fianakaviako. Tsy afaka hitsara tokoa aho raha ho lasa toerana tsara kokoa izao tontolo izao raha lasa io olona io. Naniry ny fahafatesany aho ary menatra tamin'izany faniriana izany. Mino ve ny tenako vaovao fa mety ho tombontsoa ho an'ny olombelona sisa ny fahafatesan'ny olona sasany? Ary tsy ny fiainana tsirairay no “masina”? Ary mety hamonjy aina an'arivony izany famonoana olona izany? Mazava ho azy, nanantena hatrany hatrany aho ny hahafatesan'i Bashar Al Assad – nanonofy izany mihitsy aza aho matetika. Nilalao tsy am-piheverana ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra amin'izay nanana zo ho velona sy tsy ho velona izany ve aho? Eny indrindra! voahodidin'olona mahery fo tsara tarehy lavo noho ny herisetran’ ny olona izay tokony ninoako fa nanan-jo ho velona. Sarotra ny famahana olana matematika. Oh, Oadray izany fiovako! Ary tahaka ny ahoana ny nanovan'ny fahamatorana ny fahatsorana, hevitra romantika manova izao tontolo izao amin'ny fitiavana.
Tsy dia manindry noho ny miaina any am-bava ady izany. Avy any no ahafahanay mahita ny tafika, dingana vitsy fotsiny miala ny tranonay. Nisafidy ireo toerana izahay satria toa tsy dia kendren'ny fanafihana an-habakabaka izy ireo. Io tafika io izay midaroka baomba anay andro aman'alina. Nisy toeram-pisavana eo akaiky ny toerana izay ahitanay azy ireo misotro dite ary mihaino azy ireo mianiana aminay amin'ny alalan'ny talkie-talkies, antsoinay ao Aleppo hoe “totohondry” izy ireo. Ny vazivazy ratsy mahazatra ao an-tranonay dia mikasika ny zavatra ho hataony raha miditra ao an-trano ny tafika. Tahaka ny zavatra mampatahotra rehetra, nila niatrika izany miaraka amin'ny hatsikana izahay mba hampanginana ny tahotra. Niangavy anay ny iray tamin'ireo namanay tsy hamoha azy rehefa tafiditra ao ny tafika, ary nilaza ny iray hafa fa hitsambikina eny an-davarangana izy raha mitranga izany, raha nananihany kosa aho hilaza hoe nalain'ny namako an-keriny.
” Ny vazivazy ratsy mahazatra ao an-tranonay dia mikasika ny zavatra ho hataony raha tafiditra ao an-trano ny tafika. Tahaka ny zavatra mampatahotra rehetra, nila niatrika izany miaraka amin'ny hatsikana izahay mba hampanginana ny tahotra. Niangavy anay ny iray tamin'ireo namanay mba tsy hamoha azy rehefa tafiditra ao ny tafika, ary nilaza ny iray hafa fa hitsambikina eny an-davarangana izy raha mitranga izany…”
Nilaza ny namana iray fa hampiasa fitaovam-piadiana izy ary hiady hamono ho faty azy ireo; nilaza ny iray hafa fa aleony mandoro ny tenany toy izay azo sambo-belona. Izany no sarin'ny fahafatesana eo ambanin'ny fampijaliana atao aminay. Hoy aho, mibitsibitsika: Tsy mino aho fa mahavita mamono olona. Nisy ny fahanginana, ary avy eo nihomehy ny “teniko voalaza tsara” izy rehetra. Nilaza tamin'ny lantom-peo Aleppeana ny iray tamin'izy ireo hoe: Ahoana, ry anabavy? Naveriko ny valinteny miaraka amin'ny fahatokisan'ny olona nino ny fahamendrehan'ny fanapahan-keviny: Tsy hamono olona aho!
Ary nanomboka teo ny resaka izay naharitra ora maro, mandra-panontany ny iray tamin'izy ireo hoe: Ahoana raha handeha hamono anao ny miaramila? Namaly aho hoe: Dia ho faty aho. Aleoko izaho no iharam-boina fa tsy mpamono olona. Hoy izy nanohy: Ahoana raha handeha hamono ahy ny miaramila? Ahoana raha afaka mamonjy ahy ianao? Ahoana raha mitodi-doha any amin'ny tranon'ny mpiray vodirindrina izany miaramila izany mba hamono an'i Aiisha ? Zanakavavin'ny mpiray vodi-rindrina i Aiisha izay zatra mandondona ao am-baravaranay isan'andro mba hanangona tavoahangy plastika. Kely loatra izy ka tsy tazana amin'ny lavaky ny varavarana.
Tsy fantatro raha mahavita mangalatra fiainana iray hafa aho, ary tsy nino aho fa izany tsy fahafahana izany, dia endrika hafa amin’ ny famonoana. Efa niova aho, niova endrika aho ankehitriny. Angamba izany fanazavana mitombina, na angamba efa matotra fotsiny aho.
Nihamafy ny herisetra. Tafondro, baomba amin'ny barika, balafomanga, daroka baomba, namana maty noho ny fampijaliana. Ary isaky ny tantara tsaroako—na tsy tsaroako satria misakana ahy ny atidohako ary manaisotra ireo fahatsiarovana ireo—mihena tsikelikely ny fitokisantena fa olona sady tsy mbola namono olona na te-hamono olona aho. Niely tany amin'ireo faritra noafahana ny ISIS ary nanomboka naka an-keriny tsirairay ireo mpanao gazety. Nihazakazaka nankany amin'ireo namana mitam-piadiana izahay avy eo nangataka fiarovana, izay fifanoheran-javatra lehibe sy manan-danja tokoa: “te-hitazona ny fiamboniana ara-maoraly anananay izahay, izay miankina be dia be amin'ny herisetran'ny hafa, fa tsy amin'ny tsy fanaovana herisetra.
Mbola tsy azoko, mandraka androany, ny anton'ity ady ity sy ny famahana ara-pamonoan'olona ataony. Ity ady izay tsy fantatro na hamoaka ny ratsy indrindra ao aminao na hanovana anao. Ny olona nandroba ny tranon'ny mpiray vodirindrina aminy rehefa nandositra ilay mpiray vodirindrina aminy: tsy mihevitra ho nahavita izany izy raha tsy noho ny ady. Ny olona izay maniry ny fahafatesan'ny olona rehetra izay tsy mitovy zavatra inoana ara-pivavahana aminy: fa tsapany fa manana izany fankahalana be dia be ao aminy izany izy.
Mety tsy mahaliana anao izany fanontaniako sy fisalasalako izany. Mety ho matoky tena tanteraka, tahaka ahy taloha, ianao, fa tsy mahavita, na mahavita, ny manao asam-pamonoana. Fa mbola mitoetra ny fanontaniana: “manan-kasina” ve ny aina tsirairay? Eny fa na dia ain'ny mpitolon'ny ISIS iray mampijaly ny hafa ho faty aza? Karazana famonoana olona hafa ve ny tsy fanaovana na inona na inona amin'ny mpamono anao? ny famonoanao ny tenanao? Ny famaranana ny fiainanao na ny fiainan'ny hafa izay no tokony narovanao? Moa ve ny fiainako mandrakariva miaraka amin'ny fahafatesana izay lasa mahazatra, sy ny tebiteby mbamin'ny fisalasalana iainan'ny tsirairay no vokany, no miteraka ny valin'ny fanontaniana voalohany ho lasa raha ny marina, tsy fantatro?
Tiorkia, hira iray miresaka fifankatiavana lehilahy roa, niteraka fanehoankevitra miiba
Tiorkia 9 ora izay
Tranokalam-baovao roa nobahanan'i Torkia
Tiorkia 17 ora izay
Maresaka amin'ny media sosialy Tiorka ny fandroahana devoly tamin'ny fahitalavitra
Tiorkia 18 ora izay